कहाँ पाउन युरोप सबैभन्दा भव्य वास्तुकला | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 02/07/2021)
तपाईंको अर्को छुट्टीमा केहि सब भन्दा उत्कृष्ट वास्तुकला हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि यति, त्यहाँ शायद तपाईं को लागि युरोप भन्दा कुनै राम्रो ठाउँ छ. तपाईं शास्त्रीय वास्तुकला शैलीहरू मा रुचि वा आशा हुनुहुन्छ कि केही कम-ज्ञात फेला Jewels, युरोपेली शहर तपाईं ढाकिएको छ. जहाँ सबै हेर्न गरेको भव्य वास्तुकला केही उदाहरण मा एक नजर होस् र:
इटाली तपाईं सुन्दर भवनहरु नियालेर नष्ट गर्न सक्छन् जहाँ शहर र साना सहर भरिएको छ. तपाईं हुनुहुन्छ कि रोम वा फ्लोरेन्स, लगभग हरेक कुनामा एक तस्वीर लायक छ. पर्यटकहरुका लागि सुन्दर सानो सहर लागि देख, Vicenza छ सहि गन्तव्य. तपाईं हुनुहुन्छ भने यसलाई गरेको नजिक वा भेनिस देखि एक रेल लिएर, जो पनि एक यात्रा लायक छ. जबकि Vincenza लागि famed छ यसको पुनर्जागरण वास्तुकला शैली Andrea Palladio मन मा गर्भधारण, भेनिस वास्तुकला अक्सर गोथिक छ, विस्तृत, र सुन्दर.
फ्रान्स घर हो शैलीहरू को एक विस्तृत विविधता संग केहि शहर कुनै पनि भव्य वास्तुकला प्रेमी सास फेर्न नसक्ने छोड्न हुनेछ कि. एक यात्रा लागि प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बीच, Strasbourg, बरद, र पेरिस सम्भवतः सबैभन्दा प्रस्ताव.
त्यहाँ वास्तु रत्न प्रशस्त पाउन छन् जर्मनी. यद्यपि, प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई दुई छन् बर्लिन र Rothenburg. वास्तुकला सामान्यतया इतिहास संग हातमा हात जान्छ, र तपाईं बर्लिन स्पष्ट यस जडान देख्न सक्नुहुन्छ. शहर एक पटक विभाजित गरिएको छ, र स्पष्ट केही ठाउँमा देखिने छ. कि यो एक महान ठाँउ बनाउँछ अनुभव गहिरो मा वास्तुकला र गोता विभिन्न तत्व ऐतिहासिक कला प्रभाव.
के तपाइँ तपाइँको साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmagnificent-architecture%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Architecture	यात्रा फ्रान्स	यात्री जर्मन	यात्राको रूपमा